Configuring DDNS bugharia via modem + rawụta – Taylor Lopes ツ Blog
ịdọ aka ná ntị: Nke a Post nwere ụfọdụ oru echiche a na-agaghị na-agwa.
Ọ niile malitere mgbe m natara ọrụ Hi modem / rawụta Technicolor TD5136v2 Wi-Fi, kwa ọjọọ! N'ihi ya, m zụtara Asus RT-N56U rawụta ahụ ma ọ bụrụ na ọ ka mma na Wi-Fi mgbaàmà, n'ibelata data ọnwụ.
Iji mee ka ndụ m mfe, cascateei m netwọk, ịtụkwasị Asus rawụta jikọọ na rawụta nri Technicolor. ndị ọzọ okwu, m netwọk nwetara 2 routers. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma aghaghị m hazi Nat (port ebugharị / ọrụ) na ma routers mee m IP igwefoto na-arụ ọrụ (internet). Lee ihe atụ nke otú e:
Ịntanetị      > modem/OI    > rawụta/Asus > kọmputa/igwefoto
Ịntanetị > Modem / OI > Rawụta / Asus > Kọmputa / Igwefoto 200.28.189.1 > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.N
Nsogbu na a “ị ga” Ọ bụ na DDNS. M kwere na ị maara ihe a DDNS, mgbe niile na nke ahụ bụ ihe mere m ji ebe a. ma, biko na-a nnyocha ma na-agụ na.
Rịba ama na, na a cascading m mere, Modem / Hi bụ onye nwere ka interface na Internet were a nti IP, ebe ọ bụ na rawụta / Asus natara naanị oyi IP si modem / Hi. Nke a bụ n'ezie a nsogbu, n'ihi na mgbe m nwara melite DDNS rawụta / Asus, o nyere ndị na-esonụ njehie:
"The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10,x,x,x, ma ọ bụ 172.16.x.x).. Nke a rawụta nwere ike ịbụ na ọtụtụ-Nat gburugburu ebe obibi na DDNS ọrụ ike na-arụ ọrụ a na gburugburu ebe obibi"
The saịtị onwe ya nke Asus ama mere nsogbu a:
dee: ma ọ bụrụ na wireless na-eji a onwe IP address WAN (192.168.x.x, 10.x.x.x, ma ọ bụ 172.16.x.x), Nke a rawụta chọtara-bụ-a multi netwọk ga--oyi akwa Nat. The DDNS ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na ụdị nke gburugburu ebe obibi
dee: ma ọ bụrụ na wireless na-eji a onwe IP address WAN (192.168.x.x, 10.x.x.x, ma ọ bụ 172.16.x.x), este rawụta encontrar-se-a numa rede multi-oyi akwa Nat. The DDNS ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na ụdị nke gburugburu ebe obibi
The ngwọta ya bụ ime ka ndị modem / Hi-arụ ọrụ na “mode akwa” (ụzọ akwa), ndị ọzọ okwu, Modem / Hi nanị ghọrọ ọrụ ya dị ka modulator na demodulator (na ọ dịghị ihe rawụta), relaying niile data iyi ozugbo na rawụta / Asus. Na nke a dịruru ná njọ, ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na rawụta onwe ya / Asus anọ na ha raara onwe ya nye interface maka Internet, na-IP WAN Valid na ịbụ ime PPPoE Nyocha. anya gburugburu:
Ịntanetị      > modem/OI     > rawụta/Asus > kọmputa/igwefoto
200.28.189.1  > Bridge/nara na > 192.168.0.1 > 192.168.0.N
Ịntanetị > Modem / OI > Rawụta / Asus > Kọmputa / Igwefoto 200.28.189.1 > Bridge / nara > 192.168.0.1 > 192.168.0.N
Ijikọ na modem na rawụta (akwa mode)
Next Post, n'agbanyeghị na-ezo aka Hi modem na rawụta si Asus, nhazi nwere ike yiri ọ bụla modem ma ọ bụ rawụta.
nzọụkwụ 1 – Ebe ahụ modem na akwa mode (ụzọ akwa)
Nweta modem akara panel / Hi. Nke a na-emekarị mere site mmeghe nchọgharị ma dee http://192.168.0.1 (ma ọ bụ ndị ọzọ IP dị ka 192.168.1.1, 10.0.0.1, etc). The ndabere na aha njirimara na paswọọdụ bụ “admin” n'ihi na ma. Lee maka na ịgbanwe ndị na-esonụ ọnọdụ:
MELITE > internet Mbido > internet Ntọala > Internet Connection Type > Bridge mode (kama PPPoE)
nzọụkwụ 2 – Jikọọ na netwọk cable n'etiti modem na rawụta
Were a nkịtị network cable (UTP – RJ / 45) na ịgbanwee n'etiti ngwaọrụ: onye ọgwụgwụ na-aga n'otu n'ime 4 modem ọdụ ụgbọ mmiri / Hi na ndị ọzọ na-aga na WAN / Internet rawụta / Asus.
nzọụkwụ 3 – Hazi rawụta-arụ ọrụ na DHCP nyeere
Nweta rawụta na-achịkwa panel / Asus. Nke a na-emekarị mere site mmeghe nchọgharị ma dee http://192.168.1.1 (ma ọ bụ ndị ọzọ IP dị ka 192.168.0.1, 192.168.2.1, 10.0.0.1, etc). The ndabere na aha njirimara na paswọọdụ bụ “admin” n'ihi na ma. Lee maka na ịgbanwe ndị na-esonụ ọnọdụ:
Advanced Ntọala > LAN > Basic Config > Kwado ndị DHCP Server > Ee
nzọụkwụ 4 – Hazi rawụta ka PPPoE Nyocha
Nweta rawụta na-achịkwa panel / Asus. Chọọ na-eme ka ndị na-esonụ nhazi:
Advanced Ntọala > WAN > Basic Config > WAN Connection Type > PPPoE
Advanced Ntọala > WAN > Ntọala akaụntụ > PPP Aha ojii > oi@oi
Advanced Ntọala > WAN > Ntọala akaụntụ > Password > oi123
#1 Advanced Ntọala > WAN > Basic Config > WAN Connection Type > PPPoE #2 Advanced Ntọala > WAN > Ntọala akaụntụ > PPP Aha ojii > @ Oi oi #3 Advanced Ntọala > WAN > Ntọala akaụntụ > Password > oi123
Nke a na aha njirimara na paswọọdụ PPPoE bụ ọkọlọtọ Hi. O doro anya na ị ga-eji ọzọ na aha njirimara na paswọọdụ ọ bụrụ na a dị iche iche ụgbọelu. Ọ bụrụ na ị na-amaghị, dị nnọọ akpọ gị ụgbọelu ma rịọ nbanye data maka PPPoE Nyocha. Ekwentị Hi 10631.
mere nke a, ama na ọ bụ n'ihi gị Internet na-arụ ọrụ site na Wi-Fi rawụta / Asus. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike na-a mgbe nyochaa na guzosie njikọ, na-enwe ndidi. M na-ekwu nke a, ya mere m; M chere na ọ nọ na-adịghị arụ ọrụ ma na-eche a obere ogologo na ọrụ. Testa e!
Ịmepụta na-configuring a DDNS
N'ezie nke a bụ akụkụ kasị mma nke Post, n'ihi na m zutere ihe na-akpali ọrụ a na-akpọ DNS-O-Matic. jụụ, m akọwa!
The nnukwu nsogbu bụ routers akwado DDNS ole na ole na sava, n'ozuzu oke No-IP na DynDNS. Ma echefu No-IP na DynDNS! Ọrụ ndị a na-n'ụzọ zuru ezu free ma ọ bụ mgbe, Ha nwere na-agaghị emeli, dị ka na-enwe na-eme ọ bụla 30 ụbọchị na nke a bụ saccal!
M karịsịa na-ahọrọ iji egwu (FreeDNS), na-arụ ọrụ na bụ n'ezie free. Ma, olee otú ime ma ọ bụrụ na rawụta anaghị akwado Egwu? Nke ahụ bụ ebe DNS-O-Matic. Luckily na rawụta si Asus akwado DNS-O-Matic, ekenye m DNS-O-Matic ka m subdomain kere Egwu, edebekwa ihe m WAN IP ka ụbọchị. aghọtaghị? Anyị ga-erule mgbe ahụ, ma na-echeta na nke a ga-bara uru ma ọ bụrụ na gị rawụta nwere akwado DNS-O-Matic.
nzọụkwụ 1 – Mepụta a (sub)Egwu domain na
1. ohere http://freedns.afraid.org
2. Pịa "Dynamic DNS" na ịmepụta otu akaụntụ site na menu "Mbido otu akaụntụ ebe a".
3. Abanye, ìgwè dịghị menu "Subdomains" e "tinye"
4. Rịba ama dịghị combobox "Domain" que, enweghị ọgwụgwụ, Ọ nwere otu nhọrọ "Ọtụtụ ọtụtụ ndị ọzọ dị ...", pịa ebe a!
5. Na-esote na ihuenyo, pịa "Shared Domain Registry" ma họrọ otu n'ime ọtụtụ puku ngalaba dị.
nzọụkwụ 2 – Na-isi (Key) dịghị afrai.org
(Ị ga mkpa a bụ isi na-atụ!)
2. Ìgwè dịghị menu Dynamic DNS,
3. Ná ngwụsị nke na peeji nke, ìgwè ọ dịghị njikọ “Direct URL” na-ezo aka subdomain ị kere Ụkwụ na Ụkwụ 1
4. The isi (Key) bụ akụkụ nke URL mgbe “update.php?”.
Direct URL: http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
isi (Key): iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
Direct URL: http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf Chave (Key): iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
nzọụkwụ 3 – Mepụta akaụntụ na DNS-O-Matic na tinye a Service (egwu)
1. ohere https://www.dnsomatic.com/
2. Pịa "ike a free DNS-O-Matic akaụntụ" na ịmepụta otu akaụntụ
3. Abanye, pịa na "Tinye a Service" button
4. Ọ dịghị ngwakọta “–Họrọ a ọrụ–“, nhọrọ “afraid.org”
5. Ọ dịghị Campo Key(?) Banyere Paste Key kere nzọụkwụ subdomain 1.
Lee otú ọ ga-ahụ isi na Nzọụkwụ 2: “Na-isi (Key) dịghị afrai.org”
6. Pịa bọtịnụ “pdate akaụntụ Ama”
nzọụkwụ 4 – Configuring DNS-O-Matic na rawụta
Chọọ na-eme ka ndị na-esonụ nhazi:
Advanced Ntọala > WAN > DDNS > Server > WWW.DNSOMATIC.nwere
Advanced Ntọala > WAN > DDNS > Server > WWW.DNSOMATIC.COM
1. na “Server”, nhọrọ WWW.DNSOMATIC.COM
2. na “ọbịa aha”, ebe “all.dnsomatic.com” (ma ọ bụ na-ahapụ oghere)
3. na “User Name ma ọ bụ E-mail Address”, Tinye ọrụ kere DNS-O-Matic
4. na “Password ma ọ bụ DDNS Key”, Tinye paswọọdụ gị DNS-O-Matic akaụntụ
5. ikpeazụ, pịa bọtịnụ “Tee”
Lee ọnụ ọgụgụ:
ime nke a, DDNS rawụta / Asus, site DNS-O-Matic, na-akpaghị aka na-ahụ maka emelite IP WAN na Egwu.
na, ugbu a ị nwere a free domain na IP ruo ụbọchị! Na mgbe-ip, mgbe DyDNS.
Total accesses: 24659
28 January 2017 Taylor Lopes	egwu, Asus, akwa, ddns, dns-o-matic, dnsomatic, dyndns, freedns, modem, Nat, ọ dịghị-ip, rawụta, technicolor
4 reviews “Configuring DDNS bugharia via modem + rawụta”
Ị na-eke na ngalaba
7 August 2018 ka 15:35
Leandro Santos (LiNk) kwuru:
10 September 2018 ka 0:08
LUIZ GUSTAVO MENDES MOREIRA kwuru:
ụtụtụ ọma. Nnukwu post, mana ana m eji eriri dị ndụ ma ọ bụrụ na etinye m ya na ọnọdụ akwa m ịkwụpụ akara ekwentị na nkwado modem dịpụrụ adịpụ. Know mara ka esi eme ya n’ụzọ ọzọ?
7 April 2020 ka 11:50
Enwere m otu nsogbu ahụ. Ejikwa edozi?
3 Ka 2020 ka 11:12
Nkume a comment kagbuo zara
Copyright © 2022 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 3.480.434 ohere